Farshaxanka ASCII: waa maxay, noocyada farshaxanka ASCII farshaxanka iyo barnaamijyada | Abuurista khadka tooska ah
Naqshadeeye ahaan, waxaa laga yaabaa inaad mar uun la kulanto Farshaxanka ASCII, oo sidoo kale loo yaqaan farshaxanka qoraalka. Qaabkan qaabeynta wuxuu adeegsadaa astaamaha qoraalka si loogu abuuro sawirro iyaga la jira.
Laakiin, Waa maxay farshaxanka ASCII? Nooc noocee ah ayaa jira? Sidee loo samayn karaa? Waxaas oo dhan iyo in ka badanba waa maxay, hoosta, waxaan ka wada hadli doonnaa, maaddaama farshaxankan ASCII uu aad uga badan yahay maalinba maalinta ka dambaysa sidaad moodeysid
1 Waa maxay ASCII Art
2 Aasaaska farshaxanka ASCII
3 Noocyada farshaxanka ASCII
3.5 Noocyada kale ee farshaxanka ASCII
4 Farqiga u dhexeeya farshaxanka ASCII iyo farshaxanka ANSII
5 Sida loo abuuro sawir gacmeedka ASCII
5.1 Tooshka Soft ASCII Art Studio
5.3 Qoraalaha Pro
5.5 Sida loo abuuro farshaxanka ASCII ereyga
Waa maxay ASCII Art
Farshaxanka ASCII wuxuu ka yimaadaa lambar ASCII. Waxay ku saabsan tahay a Koodhka Mareykanka (marka la soo gaabiyo, Koodhka Caadiga ah ee Mareykanka ee Is-weydaarsiga Macluumaadka) ee loo gudbiyo qaab jilayaal ah kaas oo u adeega isdhaafsiga macluumaadka. Si kale haddii loo dhigo, waxaan ka hadleynaa qalab u eg alifbeetada. Koodhkani wuxuu bilaabay in loo isticmaalo isticmaalka telefon.
Gaar ahaan, waa inaan dib u jaleecnaa Bell, oo qorsheynayay inuu adeegsado lambar lix-bit ah isagoo ku daraya xarakayn iyo xarfo yaryar koodhkii ay horay u isticmaali jireen, Baudot. Si kastaba ha noqotee, ugu dambeyntii wuxuu ka mid noqday guddi-hoosaadka Wakaaladda Heerarka Mareykanka (ASA) taas oo abuureysa ASCII.
Koodhkii ugu horreeyay ee soo muuqday markii ugu horraysay wuxuu ahaa 1963, halkaasoo lagu arkay fallaadh kor u taal halkii loo yaqaan 'Fiveflex' (^), halka fallaarta hoos loo dhigay meel hoosta laga xariiqay.
Sanadihii la soo dhaafay, dhowr calaamadood ayaa is beddelay. Xilligan, ANSI x3.4-1986 waa midka xukuma (in kasta oo uu jiray wax ka beddel 1991 kii oo aan haba yaraatee beddelin lambarka ASCII.
Xaqiiqdii, koodhka ASCII aad ayuu uga dhib badan yahay farshaxanka ASCII laftiisa, maadaama tani ay tahay kaliya anshax marinta dadka laga tirada badan yahay oo mas'uul ka ah sameynta sawir kasta oo ku saleysan astaamaha ASCII daabacan. Natiijadu waxay aad ugu egtahay wixii lagu gaari lahaa farsamada dhibcaha, oo leh aragti fiican haddii muuqaalka laga arko meel fog halkii laga xidhi lahaa.
Tani waxay noqotay mid caan ku ah matalaan sawirrada maalmahanna waxaa jira barnaamijyo badan oo kuu oggolaanaya inaad abuurto sawirrada noocan ah, sidoo kale fiidiyowyo.
Aasaaska farshaxanka ASCII
Farshaxanka ASCII wuxuu ku saleysan yahay lambar gaar ah, waxa loogu yeero lambar ASCII. Waana in dabeecad kasta, warqad, mid gaar ah ... lagu matali karo lambarada laga bilaabo 00 ilaa 255. Xaqiiqdii, haddii aad rabto inaad dhammaantood ogaato, waxaan kuu deyneynaa degel aad ka awoodi karto dhammaantood hel.
Koodhka aasaasiga ah ee 7-bit wuxuu sheegayaa waxyaabaha soo socda:
In laga bilaabo 0 illaa 31 aan loo isticmaalin jilayaasha, laakiin ay yihiin kuwa «xakameynta».
In 65 ilaa 90 ay yihiin xarfo waaweyn.
Laga bilaabo 97 ilaa 122 waxaa jiri doona xarfaha yaryar.
Noocyada farshaxanka ASCII
Waqti ka dib, farshaxanka ASCII wuu is beddelay oo noocyo farshaxanno kala duwan ah ayaa soo ifbaxay, sida kuwa soo socda:
Farshaxanka toosan ee ASCII waa mid ka mid ah, halkii aad ka isticmaali lahayd lambar nambar ah, waxa ay qabato waa adeegsiga khadadka, mar khafiifa, marna dhibco, marna baararka iyo dhibco ...
Waxay ku habboon tahay sameynta sawirro aad u fudud oo yar-yar tan iyo markii, intay weynaatay, laga yaabee inaan loo arkin gebi ahaanba.
Xaaladdan oo kale, Halkii laga xadidi lahaa sawirka, muxuu sameeyaa waa «midabkiisa», laakiin adeegsiga nambarada tan. Waxay si aad ah ugu shaqeysaa sawirrada dhexdhexaadka ah iyo kuwa waaweyn, in kasta oo kuwa yaryar, illaa iyo inta ay aad u fudud yihiin oo fudud yihiin, sidoo kale waa loo isticmaali karaa.
Miisaanka cirka wuxuu adeegsadaa isla saldhigga kor ku xusan, farshaxanka ASCII adag. Si kastaba ha noqotee, waxay adeegsadaan jilayaal kala duwan, ma aha oo kaliya koodhka laakiin sidoo kale midabka koodhka, si loo go'aamiyo sawirrada hooska leh. Sidaa darteed, waa tan ugu habboon ee lagu sawiro wejiyada.
Farsamadan ayaa ah tan ugu qalafsan, in kasta oo natiijooyinka ay aad u cajaa'ib badan yihiin.
Noocan farshaxanka ASCII si fiican looma yaqaan. Haddana sidoo kale way jirtaa. Waxaad ku arki kartaa caddeyn tan tan Alice buugga Wonderland. Ikhtiyaar kale ayaa ah in la abuuro gabayo ama qoraal meel fog laga fiirinayo oo meteli kara xayawaan ama shay.
Xaqiiqdii, waxaa jira degello internet ah oo aad ku gaari kartid saameyntaas adoo dhigaya erey ama weedh.
Noocyada kale ee farshaxanka ASCII
Ma iloobi karno inaan xusno farshaxanada kale ee ASCII, badankood waa kala duwanaansho ama isku darka kuwii hore.
Farqiga u dhexeeya farshaxanka ASCII iyo farshaxanka ANSII
Khaladaadka waa weyn waxaa ka mid ah in loo maleeyo in farshaxanka ASCII iyo farshaxanka ANSII ay isku mid yihiin. Laakiin run maahan.
Dhab ahaantii ASCII waa asalka, oo laga soo qaatay ANSII, kaas oo ah kan ogolaanaya adeegsiga jilayaal badan (kuwa MS-DOS) iyo midabbo badan (illaa 16 midab).
Sida loo abuuro sawir gacmeedka ASCII
Sawirada farshaxanka ASCII waxaa lagu abuuri karaa iyadoo la adeegsanayo lambar ASCII laakiin sidoo kale iyadoo la adeegsanayo astaamo kale ama emoticons. Xaqiiqdii, waad abuuri kartaa naftaada, ama waxaad lahaan kartaa tifaftiraha sawirka ama tifaftiraha qoraalka. Si tan loo sameeyo, waxaad isticmaali kartaa astaamaha kumbuyuutarrada u gaarka ah, oo ku habboon abuurista sawirro muuqaal ah.
Ikhtiyaar kale ayaa ah in la isticmaalo Unicode jilayaasha gaarka ah, taas oo siinaysa waxtar muuqda muuqaal natiijada.
Barnaamijyada waxaad ka dooran kartaa ikhtiyaarro kala duwan, tusaale ahaan:
Tooshka Soft ASCII Art Studio
Kani waa tifaftire sameynta hal abuurka farshaxanka ASCII fudud. Isagu xitaa wuxuu awood u leeyahay inuu sawir ku beddelo farshaxankan.
Haddii waxa aad raadineyso ay yihiin tifaftire sawir oo adeegsanaya farsamadan, markaa waa inaad isku daydaa barnaamijkan. Waa lacag la’aan, sida tii hore oo kale, oo wax badan kuma qabsandoonto.
Barnaamijka ugu habboon u beddelo sawir xuruuf iyo ereyo. Waxaad sidoo kale farsamadan ka abuuri kartaa mosaics ka xoq.
Barnaamij kale oo aan kugula talin karno in sawirrada loo beddelo farshaxanka ASCII.
Sida loo abuuro farshaxanka ASCII ereyga
Haddii aad leedahay erey, OpenOffice, LibreOffice ama wax lamid ah, waxaad naftaada ku abuuri kartaa naqshad lambarkan. Hadda, waa inaad tixgelisaa dhinacyada qaarkood:
Xulo font wanaagsan. Xaaladdan oo kale waxaan kugula talineynaa inaad ku sharraxdo Times New Roman, Georgia, Arial, Verdana, Comic Sans, Tahoma ...
Haddii aad isticmaaleyso jilayaal gaar ah, waa inaad isticmaashaa font runti leh dhammaantood, sida Arial ama Calibri.
Waa kuwan tusaalayaal natiijada aad heli doontid.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Sawirro » Farshaxanka ASCII
Watermark: waa maxay, maxay muhiim u tahay iyo sidii loo abuuri lahaa tallaabo tallaabo